नेपाल आज | सरकारका उपसचिवलाई सरकारी जागिरप्रति ठूलो वितृष्णा (भिडियोसहित)
सरकारका उपसचिवलाई सरकारी जागिरप्रति ठूलो वितृष्णा (भिडियोसहित)
काठमाडौँ । सरकारी जागिरप्रति अधिकांश मानिसहरुको ठूलो आकांक्षा रहन्छ । सरकारी जागिरकै लागि धेरैले प्रयास गरेका हुन्छन् । तर सरकारी जागिरप्रति कतिपयको ठूलो वितृष्णा छ । पावर, प्रभाव, पहुँच नपुग्नेहरुलाई सरकारी जागिर बोक्नु न टोक्नु हुन्छ ।
पछिल्लो पटक सरकारले ल्याएको समायोजनप्रति असन्तुष्टि जनाउनेहरु थुप्रै छन् । सरकारी जागिरमा असन्तुष्टि जनाउनेमध्येकै एक हुन् ईश्वरीप्रसाद पोखरेल । गुल्मीका पोखरेल नेपाल सरकारका उपसचिव हुन् ।
उपसचिव उनी दैनिक भक्तपुरको शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र कार्यालय जान्छन्, हाजिर गर्छन तर दिनभर काम नगरेर फर्कन्छन् । सरकारले उनलाई कुनै कार्य तोकेको छैन तर तलब महिनावारी दिन्छ । उनी भन्छन् –‘‘दैनिक कार्यालय गयो, हाजिर गर्यो अनि आयो । काम पाईएन हेरौँ कतिञ्जेल सरकारले यसरी राख्छ । ’’
समायोजनमा पोखरेलको पूर्ण असन्तुष्टि छ । उनी भन्छन् –‘‘समायोजनको नाममा आफूभन्दा तल्लो वा जुनियर कर्मचारीले हामीलाई शासन गर्नु कत्तिको सुहाउँछ । ’’ त्यसो भए सरकारले बनाएको कानून नमान्ने हो ? सरकारलाई चुनौती दिएको हो ? उनी भन्छन् –‘‘ म कर्मचारी हो कानून मान्दिन भन्ने होइन तर म र मेरो ल्याकत अनुसारको मान्छेले वा म भन्दा सिनीयरले मलाई अर्डर गरोस् शासन गरोस् म स्वीकार्छु तर समायोजनका नाममा जुनियर मेरो प्रमुख हुने भए किन मान्नु ? ’’
उनले एक्लैले विरोध पनि गरेका रहेछन् । समायोजनको विरोध माईतीघरमा दुई दिन विरोधमा उत्रिँदा प्रहरीले पक्रेछ । उनल प्रधानमन्त्रीदेखि सबै सांसदलाई भेटेर समस्याको गुनासो गरेपनि सुनुवाई नभएपछि झण्डै १० वर्ष सरकारी शिक्षक रहेका उनी सरकारको उपसचिव हुनुमा ठूलो फ्रष्टेशन सुनाउँछन् । खाश कारण के रहेछ त हेर्नुहोस् यो भिडियो ।